कृष्ण गिरी काठमाडौं, १७ जेठ
युवा वय । परिवर्तनको चाहना । क्रान्तिकारी चेतको बीजारोपण हुँदै गरेको बेला । एउटा युवामा समाज परिवर्तनको, राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको चाहना हुनु स्वाभाविक हो । त्यसमाथि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाप्रतिको आमजनमा बढिरहेको वितृष्णा ।
२०२५ सालतिर, जतिबेला तत्कालीन राजा महेन्द्रले १० वर्षे शिशु प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेर निर्दलीय पञ्चायत सुरु गरेको एक दशक हाराहारी मात्र भएको थियो, तर निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध जनआवाज र विद्रोह जारी थियो । त्यही बेला यी युवकले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने सोचे ।
उनको राजनीतिक यात्रा झापा आन्दोलनबाट सुरु भयो । निर्दलीय व्यवस्थामा विद्रोह गर्नु, राजनीति गर्नु सोचेजस्तो सहज हुँदैन भन्ने थाहा थियो उनलाई । तथापि, उनी होमिए लोकतन्त्रका लागि राजनीतिमा ।
उमेर सानै थियो । २०२७÷०२८ सालतिर नेकपा मालेमा सङ्गठित भए उनी अर्थात् नरेश खरेल । राजनीतिक रूपमा परिवर्तन नगरी केही पनि परिवर्तन हुँदैन भन्ने चेत जागरुक भएको थियो । त्यही बेला राज्य व्यवस्था परिवर्तनका लागि गरिएको विद्रोहका क्रममा २० साउन २०३० मा पक्राउ परे नरेश । पछि २०४६ सालमा रिहाइ भए ।
यसरी परे पक्राउ
२० साउन २०३० मा झापाको नरियाबाडीबाट पक्राउ गरिएको थियो नरेशलाई । पक्राउ परेपछि झापाको एसपी कार्यालयमा राखिएको थियो । त्यसबेला झापाका एसपी पदमबहादुर मानन्धर थिए ।
एसपी कार्यालयमा बाँसका लौराले कुटेको सम्झँदा नरेश अझै सिरिङ्ग हुन्छन् । ‘खुर्सानी-पानी र पोटास-पानी नाकबाट हाल्थ्यो । हात-खुट्टाका औँलामा पिनले घोच्थ्यो । यातनाको कुनै सीमा थिएन, एसपी कार्यालयमा’, नरेशको अनुहार नै अमिलो बन्छ त्यो सम्झिँदा ।
उनीहरूलाई एसपी कार्यालयमा राखेपछि प्रहरी दिनभर नरेशका साथीहरूलाई खोज्न जान्थे । भेट्दैनथे अनि त्यही रिसमा राती नरेशहरूलाई चरम यातना दिन्थे । उनका अनुसार प्रहरीको कुटाइको कुनै सीमा थिएन ।
‘झापामा बन्दी भएर बस्दा नै हामी सकिन्छ भने पर्खाल नाघेर भए पनि भाग्नुपर्छ भन्ने योजना बनाउँथ्यौँ तर सफल हुन सकेनौँ’, नरेश भन्छन्, ‘हामीले नेलका साङ्लाहरू खोलेर जोड्ने बनाएका थियौँ । यो धेरै लामो समयको मिहिनेतले सम्भव भएको थियो । हामीले आवश्यक पर्दा नेलका साङ्ला खोलेर विस्तारै हिँड्थ्यौँ ।’
भाग्ने पहिलो योजना विफल
नरेशहरूले अदालतमा बयान दिन जाँदा नेल खोलेर भाग्ने योजना बनाए तर सफल हुन सकेनन् । अर्को पटक जेलका झ्यालका रड काटेर भाग्ने योजना बनाए । उक्त योजनाका लागि ह्याक्सो ब्लेड मगाएका थिए तर त्यही समयमा डकैतीको अभियोगमा जेल बसेका मानिस भागे । उनीहरू भागेपछि नरेशहरूको योजना सफल हुन सकेन ।
‘हामीले जेलमा राष्ट्रिय गान गाउन मानेनौँ । त्यो समयमा बिहान-बेलुका जेलमा नै राष्ट्रिय गान गाउनुपथ्र्यो तर हामी राजनीतिक बन्दीहरूले गाउन मानेनौँ । यो प्रचलन हामीले तोड्यौँ’, नरेश भन्छन् ।
जन्म कैदको फैसला
नरेशहरूका लागि भनेर झापामा विशेष अदालत गठन गरियो । अदालतका न्यायाधीश थिए, त्रिलोक्यप्रताप राणा । उनीहरूलाई १० महिना झापामा राखियो । झापाको विशेष अदालतले जन्म कैदको फैसला सुनायो । त्यही फैसला नै उनीहरूका लागि अन्तिम फैसला भयो ।
‘त्यो फैसला आएपछि हामीलाई जेल सरुवा गरियो । हामीलाई झापा जेलबाट सरुवा गरेर वीरगञ्ज जेलमा ल्याइयो’, ती दिन स्मरण गर्छन् नरेश ।
भाग्ने दोस्रो प्रयास पनि विफल
वीरगञ्जमा आएपछि नयाँ वातावरण भयो । पक्राउ परेको दिनदेखि नै जेल तोडेर भाग्ने योजना बनाएका थिए उनीहरूले । ‘हामी सबै राजनीतिमा लागेका मानिस थियौँ । राजनीतिक, सैद्धान्तिक, वैचारीक रूपमा एकता भएकाले हामीमा सबै कुराहरू मिल्थे । जुन काम गर्छौं भन्थ्यौँ, त्यो सबै एक भएर गथ्र्यौं’, नरेश भन्छन् ।
वीरगञ्जमा आएपछि त्यहाँ भएका साथीहरूसँग राजनीतिक छलफल सुरु गरे । यहाँ पहिलादेखि नै केही राजनीतिक बन्दीहरू थिए । तिनै बन्दीहरूको सहयोमा वीरगञ्जका वामपन्थी नेता सोमकुमार चौधरीसँग सम्पर्क गरे ।
‘उनलाई हामीले जेलबाट भाग्ने योजना भन्यौँ । उनले हामीलाई सहयोग गर्ने बचन दिए । उनलाई भूगोलको जानकारी थियो । यहाँबाट भाग्नेवित्तिकै भारत पुगिन्छ र सुरक्षित स्थानमा पुग्न सकिन्छ भनेका थिए’, नरेश सम्झिन्छन्, ‘तर, हामीले योजना बनाएको जेल प्रशासनले थाहा पाएर हो अथवा अर्कै कारणले हो, हामीलाई जेल सरुवा गरेर काठमाडौं ल्याइयो ।’
वीरगञ्जबाट काठमाडौैं जेल सरुवा
‘हामी झापामा धेरै साथीहरू पक्राउ परेका थियौँ तर केहीलाई झापामा नै राखियो, केहीलाई मात्र काठमाडौं ल्याइयो । काठमाडौ ल्याइएको टोलीलाई पनि ३ वटा जेलमा अलग अलग राखियो’, नरेश भन्छन् ।
नरेशगायतका केहीलाई सेन्टर जेलमा राखियो । त्यहीँ उनीहरूले एउटा कमिटी बनाए । त्यस समयमा नरेश, राधाकृष्ण मैनाली, घनेन्द्र बस्नेत, दुर्गा अधिकारी र मंगलमणि सतारलगायतलाई सेन्टर जेल पठायो ।
‘साउनमा पक्राउ परेका थियौँ । पहिला आरके मैनालीको घरबाट मानिस भेट्न आए । हामी जेलमा पुग्दा मोहनचन्द्र अधिकारी र केपी ओली राजकाज मुद्दामा सेन्टर जेलमा थिए’, नरेश भन्छन् ।
‘१५ वर्ष जेलमा बसियो । सेन्टर जेलमा १ वर्ष बसेँ । दैनिक काम केही हुँदैनथ्यो । राजनीतिक बन्दीहरू थियौँ हामी । हामीबीच राजनीतिक कुराहरू हुन्थे’, नरेश भन्छन्, ‘जेलमा दुःख पाएका कैदीहरूसँग मिलेर सुधारका काम गर्‍यौँ । उनीहरूसँग छलफल र बहस गर्ने काम सुरु गरेका थियौँ ।’
पार्टी कमिटीमा नेतृत्वहरू बस्थे । अन्य कैदीसँग छलफल गरेर समर्थक बनाउँथे । बन्दीहरूलाई सहयोग गर्दा उनीहरूमा पनि परिवर्तन आउन थाल्यो ।
‘साँच्चै अपराधमा लागेकाबाहेक परिबन्धमा परेका मानिसहरूसँग राजनीतिक रूपमा नै कुरा गथ्र्यौं । पार्टी सदस्यता दिने र समर्थक बनाउने काम गथ्र्यौं’, ऊबेलाको सम्झना गर्छन् नरेश ।
केही व्यक्तिहरू छोटो समयका लागि जेल गएका थिए । उनीहरूसँग छलफल गर्थे नरेशहरू । उनीहरू छुटेर बाहिर आउँदा पनि पार्टी सङ्गठनमा लाग्नुपर्छ भनेर राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षण दिने गरेको बताउँछन् नरेश । भन्छन्, ‘उनीहरू छुट्दा घर परिवारलाई पत्र लेख्थ्यौँ । उनीहरूको माध्यमबाट घर परिवारसँग सम्पर्क हुन्थ्यो ।’
जेलभित्रका दाइ नाइके, भाइ नाइके पनि कम्युनिस्ट भनेपछि धेरै दुःख दिन्थे । उनीहरू नरेशहरूलाई जिउँदै खाउँलाझैँ गर्थे । ‘हामीलाई सताउने, दुःख दिने काम गर्थे नाइकेहरूले । छिछि र दूरदूर गर्थे’, नरेश भन्छन् ।
नख्खु जेलमा पुगेपछि फरक वातावरण बन्यो । नख्खु जेल राजनीतिक कैदीहरूका लागि खोलिएको थियो । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका व्यक्तिहरू पनि थिए ।
‘त्यहाँ पूरा राजनीतिक वातावरण थियो । द्वारिकानाथ उप्रेती थिए । उनी पहिलो बीए पास गर्ने मानिस हुँ भन्थे’, नरेश ती दिन स्मरण गर्छन् ।
सबै बसेर सँगै खाना खान दिँदैनथ्यो । सबै सँगै बसेर खान्छौँ भनेर आन्दोलन गर्थे उनीहरू । ‘यसका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । कुटाइ खायौँ तर सबै झापालीहरू एक ठाउँमा बसेर खाना खान थाल्यौँ’, नरेश भन्छन्, ‘जेलमा एकै ठाउँमा बसेर खान नदिनु भनेको मिल्न नदिनु थियो । मिलेर बसे आन्दोलन गर्छन् भनेर फुटाऊ र राज गरको नीति थियो । झापालीहरूको पनि फरक फरक भान्सा थियो तर पछि हामी सबैले एउटै भान्सा बनायौँ ।’
जेलभित्र मानिसलाई व्यक्तिवादी र अविश्वासी बनाउने गरेको उनको अनुभव छ । एकअर्काप्रति अविश्वासको वातावरण सबैभन्दा बढी जेलभित्र हुने उनलाई महसुस भएको बताउँछन् ।
नेपाली कांग्रेसको समूह र वामपन्थीको समूह थियो जेलमा । त्यहाँ सबैको रेखदेख गर्ने केही मानिसहरू थिए । त्यसबाहेक कोही हुँदैनथे नख्खु जेलमा ।
‘त्यहाँ पनि हाम्रो काम राजनीतिक बहस गर्ने, छलफल गर्ने, पत्रपत्रिका र राजनीतिक पुस्तक पढ्ने हुन्थ्यो । प्रत्येक शुक्रबार र शनिबार सांस्कृतिक कार्यक्रम, वादविवाद कार्यक्रम गथ्र्यौं’, नरेशको भनाइ छ ।
घरबाट सामान आउँदा सबैलाई बाँड्थे उनीहरू । खाना पनि बाँडेर खान्थे । कोही साथी बिरामी भयो भने उपचार गर्न खर्च जससँग छ, उसैले गर्ने गरेको स्मरण गर्छन् नरेश । ‘हामीमा सामूहिकता थियो । २०३२ सालमा चन्द्रप्रकाश मैनाली (सीपी मैनाली) गिरफ्तार भए । त्यसपछि हाम्रो आन्दोलन पछाडि धकेलियो’, नरेश सम्झिन्छन्, ‘हामी जेलमा हँुदा बाहिरका कुराहरू पनि जानकारी राख्थ्यौँ । हामीभन्दा पहिला छुटेका साथीहरूसँग निरन्तर सम्पर्क हुन्थ्यो । लेख, रचना उनीहरूका हातमा नै पठाउँथ्याँै । उनीहरूले छाप्ने व्यवस्था गर्थे ।’
झापालीहरूको मनमा एउटा कुरा भने सधैँ रहिरहेको हुन्थ्यो रे- जेल ब्रेक कसरी गर्ने ? झापादेखि नै भाग्न खोजेका थिए उनीहरू तर कहीँ पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । ‘झापामा भाग्ने अनेक उपाय बनायौँ तर सफल भइएन । वीरगञ्जमा पनि भाग्ने तयारी गरियो तर काठमाडौं सरुवा गर्‍यो । सेन्टर जेलमा पनि अनेक प्रयास गरेका थियौँ, सफल हुन सकिएन’, उनी भन्छन् ।
नख्खु जेल भर्रखर बनेको थियो । त्यसमा पनि महिला बन्दी र पुरुष बन्दी बस्ने फरक फरक भवन बन्दै थिए । त्यहाँ भवन बनाउन चाहिने सामानहरू राखिएका थिए । गुर्जा पनि राखेका थिए । त्यही गुर्जामाथि चढेर दिवार नाघेर भाग्न सकिन्छ कि भनेर धेरै तयारी गरेका थिए । यो २०३२ सालतिरको कुरा हो । त्यो पनि सम्भव भएन ।
‘विस्तारै त्यहाँ अन्य बन्दीहरू पनि ल्याउन थालियो । त्यस कारण धेरै चहलपहल हुन थाल्यो । भाग्ने योजना बीचमा स्थगित गर्‍यौँ । निर्मल लामा पनि नख्खुमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भद्रगोल जेलबाट भाग्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । उहाँसँग पनि भाग्ने कुराको सल्लाह माग्यौँ’, नरेश भन्छन्, ‘उहाँले त हामीलाई निराश बनाउन खोज्नुभयो । यस्ता काम गर्नुहुँदैन भन्नुभयो । हामी निराश त भएनाँै तर यस्तो किन भन्नुभयो भनेर कुरा मनमा खेलिरह्यो ।’
सीपी मैनालीलाई झापा जिल्लामा राख्दैन भन्ने थियो । हुन पनि त्यही भयो । उनलाई पनि सेन्टर जेल ल्यायो । पछि नख्खु जेल ल्यायो । ‘सीपी मैनाली नख्खु जेल आएपछि सबैले छलफल गर्‍यौँ । नयाँ वातावरण बनाएर जेलबाट भाग्ने योजना बनायौँ । यसका लागि सबै तयारी गर्नुपथ्र्यो । जेलमा भाग्ने कुरा त सोच्न पनि सकिँदैनथ्यो’, नरेश त्यो अप्ठ्यारो समयको सम्झना गर्छन्, ‘यसो गर्नु भनेको जुनसुकै समयमा पनि मर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यसका लागि हामी सबैले राजनीतिक, सैद्धान्तिक रूपमा सबैलाई प्रशिक्षण दियौँ । आफूहरू पनि पूरा तयारीमा लाग्यौँ ।’
केही साथीहरूले मेन गेटबाट भागौँ भनेको, केहीले दिवार नाघ्नुपर्छ भनेको सम्झन्छन् उनी । ‘केही साथीहरूले भने सुरुङ खनेर भाग्ने योजना बनायौँ । अन्तिममा सुरुङ खन्ने कुरामा सहमत भयौँ’, नरेश सुनाउँछन् ।
तेस्रो पटक भाग्ने योजना सफल
नख्खुमा विवाद भयो । रुद्र खरेललाई झापाबाट समातेर ल्याइएको थियो । उनी झापा आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । तर, प्रहरीले उनलाई झापाली आन्दोलनकारी भनेर जेल ल्यायोे । उनी आफू झापाको आन्दोलनमा सहभागी छैन भनेर छुट्न चाहन्थे ।
नरेशका अनुसार रुद्र खरेलले आफू आन्दोलनकारी होइन भनेपछि प्रशासनले झन् शंका गरेर राधाकृष्ण मैनाली, केपी ओली र मोहनचन्द्र अधिकारीलाई पुनः सेन्टर जेलको गोलघरमा हाल्यो ।
‘हामी भने सबै नख्खुमा नै थियौँ । सबैले आआफ्ना कामहरू गर्ने भनेर कामको विभाजन गर्‍यौँ । कसैले थाहा नपाओस् भनेर गोपनीयताको कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण थियो त्यसबेला । यसका लागि सबै राजनीतिक र वैचारिक रूपमा प्रस्ट हुन आवश्यक थियो’, नरेश भन्छन् ।
सुरुङ खन्न केहीलाई जिम्मा दिइयो । केहीले माटोलाई व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो । खन्नुभन्दा पनि माटोको व्यवस्थापनको चुनौती बढी थियो । सुरुङ खन्नेमा माधव पौडेल, जीवन मगर, वीरबहादुर तामाङ, भीष्म धिमाल आदि थिए । त्यो समयसम्म मेन गेटबाट भागौँ भन्नेहरूलाई पनि कन्भिन्स गरिसकेका थिए ।
‘माटो व्यवस्थापन गर्न हामीले फूलबारी बनायौँ । भित्रको माटो बाहिर ल्याएर फूलबारी बनायौँ । खन्नलाई भने डाडु-पन्युको प्रयोग गरेका थियौँ’, नरेश भन्छन् ।
सुरुङ खन्ने काम ९ फागुन २०३३ देखि सुरु गरेका थिए । १२ चैतमा १५ जना सुरुङबाट बाहिर निस्किए । ६५ मिटर लामो सुरुङ खनेका रहेछन् ।
‘२ जना साथीहरूलाई भने भित्रै छाड्यौँ- मोहन उप्रेती र सूर्य कन्दङ्वा । मोहन उप्रेतीलाई थाहा दिएनौँ । सूर्य कन्दङ्वालाई भने थाहा थियो । उहाँ छिट्टै छुट्दै हुुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई जोखिम मोल्न लगाएनौँ’, नरेश त्यस क्षणलाई सम्झिन्छन्, ‘अर्को हामी १५ जना मारियौँ भने पनि यसरी मारिए भनेर बाहिर खबर आओस् भनेर पनि हो ।’
फूलबारी बनाउन कांग्रेस र वामपन्थीको प्रतिष्पर्धा हुन थाल्यो- कसले राम्रो फूलबारी बनाउने भनेर । तर, उनीहरूको उद्देश्य माटोको व्यवस्थापन थियो । ‘हामीले फूलबारी बनाएर नै माटोको व्यवस्थापन गरेका थियौँ’, नरेश भन्छन् ।
५ दिनपछि गिरफ्तार
उनीहरू नख्खु जेलबाट १२ चैतको राती भागे । भाग्दा ३ वटा समूह बनाएका थिए । ६५ मिटर लामो सुरुङबाट भागेर बाहिर आउँदा समूहबीचमा भेटघाट गर्ने भनेका थिए ।
‘हामी ३ घण्टाजतिको समय लगाएर बाहिर निस्कियौँ । बागमती र नख्खुको दोभानमा भेट्ने योजना बनाएका थियौँ । तर, गोपाल शाक्य र नारायण वाग्लेलाई भेट्न सकेनौँ’, नरेश भन्छन्, ‘हामीले धेरै समय पख्र्यौं तर उनीहरू आएनन् । हामी फेरि आफ्नो बाटो लाग्यौँ ।’
काठमाडौंमा लुक्न चाहेका थिए उनीहरू तर सकेनन् । ‘वीरबहादुर तामाङले एउटा घरमा लिएर जानुभयो । ललितपुरको डाँडामा वास बस्यौँ । त्यो घर वीरबहादुरको काकाको रहेछ’, नरेश सम्झिन्छन् ।
१५ जना अलग अलग बाटो भएर हिँड्ने योजना थियो । त्यहीअनुसार उनीहरू तितरवितर भए ।
हिँड्दा हिँड्दै पथलैया पुगे । ‘५ दिन हिँडेका थियौँ । ५ दिनपछि प्रहरीले पथलैयाबाट गिरफ्तार गर्‍यो । पथलैयामा हामी ३ जना गिरफ्तार भयौँ- कामेश्वर हलवाई, म र घनेन्द्र बस्नेत’, नरेश भन्छन्, ‘हामीलाई समातेपछि एसपी कार्यालयमा राखियो । हामीले लामो समयसम्म हामी होइनौँ भन्यौँ तर काठमाडौंबाट फोटा लिएर गए । सबैको अनुहार मिलेपछि फेरि काठमाडौं ल्याइयो । हामी आफ्ना कमजोरीले गिरफ्तार भएका थियौँ त्यस बखत ।’
उनीहरूलाई पुनः नख्खु जेलमा राख्यो । पछि नख्खुमा पनि गोलघर बनाइएको थियो । हामीलाई हतगढी र नेलसहित राखियो । नारद वाग्ले र धर्म घिमिरेलाई पनि गिफ्तार गरेको रहेछ । सबैलाई सजायमाथि अझ थप समय थप्यो । १४ वर्षको सजाय बाँकी भएकालाई २१ बर्ष बनायो’, नरेश स्मरण गर्छन् ती दिन ।
त्यसपछि पनि भाग्ने कुरा त सोचे तर सफल हुन सकेनन् । ‘गोलघरमा हुँदा त के भाग्नु ! २०३६ सालमा जनमतसङ्ग्रहको समयमा अलिक बढी सोच्यौँ । हामीलाई २०३६ सालपछि मात्र राजबन्दीको व्यवहार गर्न थालेको थियो ।’
जेलभित्र पनि पार्टी लाइनभन्दा बाहिर गएनन् उनीहरू । कांग्रेसहरूले जनआन्दोलन गर्छु भन्नू भन्दा मानेनन् । ‘यस कारण हामीलाई २०३६ को जनमतसङ्ग्रहमा छाडेन । कांग्रेसका अरू सबैलाई छाडेपनि खुमबहादुर खडका जेलमा नै थिए । उनी खरखजाना मुद्दामा थिए’, नरेश भन्छन्, ‘उनले आफूले भाग्न चाहेको र भाग्दा मलाई पनि भन्नु भनेका थिए । हामीले पहिला त भाग्ने कुरा भनेनौँ । उनले पनि भाग्न सुरुङ खनाउन थालेका रहेछन् । तर, ती सबै सुरुङ खन्ने मानिस राजनीति नबुझेका रहेछन् । ती सुरुङ खन्ने मानिसका कारण पोल खुल्यो उनको । त्यसबाट हामी पनि असफल भयौँ ।’
त्यसपछि केही मानिसलाई पुनः जेल सरुवा गर्‍यो । २०३६ सालपछि आफन्त भेट्न पाउने छुट थियो, त्यो पनि हटायो प्रशासनले । पछि चामल बहिष्कार आन्दोलन चलाए ।
‘हामीले ४६ दिन आन्दोलन गर्दा पनि केही भएन । उल्टै मोहनचन्द्र अधिकारी, भीष्म धिमाल,म र घनेन्द्र बस्नेतलाई भद्रगोल जेल सरुवा गर्‍यो’, नरेश सम्झन्छन् ।
२०४५ सालको कुरा हो । नख्खुबाट भद्रगोल जेलमा सरुवा गरियो उनीहरूलाई । भद्रगोलमा आएपछि विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्न थाल्यो प्रशासनले । ‘प्रशासनले हाम्रा नेताहरूलाई छाड्ने आवाश्वसन दिन थाल्यो । मोहनचन्द्र अधिकारीले प्रशासनको कुनै कुरा मान्नुभएन । हामीलाई माफी माग्न भनियो तर हामीले मानेनौँ’, नरेश भन्छन्, ‘हामीले कहिल्यै अदालतमा रिट पनि हालेनौँ । झापाको अदालतले जे फैसला गरेको थियो, त्यहीअनुसार हामी बन्दी भएका थियौँ ।’
जनआन्दोलन हुने तरखर थियो । सरकारले सोचेको थियो- कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्दैनन् । ‘त्यही भएर हामीलाई पनि छाड्ने मनसाय बनाएको हुनुपर्छ । हामीलाई १९ पुस २०४६ मा विनाशर्त छाड्यो । समातेको दिनपछि दोस्रो पटक खुला आकाशमा आयौँ’, नरेश लामो स्वास फेर्छन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ १७, २०७७, ०९:२६:००